Title: Collected Burmese laws of 1957 (English, Burmese (မြန်မာဘာသာ)
Title: Collected Burmese laws of 1957 (English, Burmese (မြန်မာဘာသာ) Table of Contents
Description/subject: 44 laws (မာတိကာ)
Title: Parliament of the Union of Burma Law No. 15/1957 - ၁၉၅၇ ခုနှစ်၊ ရှေးဟောင်းဝတ္ထုပစ္စည်းများအက်ဥပဒေ
Title: Parliament of the Union of Burma Law No. 52/1957 - ၁၉၅၇ ခုနှစ်၊ မြန်မာဘာသာပြန်ဥပဒေနှင့်ဥပဒေဝေါဟာရအက်ဥပဒေကို ရုပ်သိမ်းခြင်
Title: Parliament of the Union of Burma Law No. 54/1957 - ၁၉၅၇ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအက်ဥပဒေ
Title: Parliament of the Union of Burma Law No. 55/1957 - ၁၉၅၇ ခုနှစ်၊ ရေနံဓာတ်ပင်ရင်းအခြေအမြစ်များ (တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းမှု၊စည်းမျဥ�
Title: Parliament of the Union of Burma Law No. 46/1957 - ၁၉၅၇ ခုနှစ်၊ အရေးပေါ်စီမံမှု (ယာယီပြင်ဆင်ချက်) အက်ဥပဒေ
Title: Parliament of the Union of Burma Law No. 49/1957 - ၁၉၅၇ ခုနှစ်၊ လယ်ယာမြေ နိုင်ငံပိုင်ပြုလုပ်ရေး (ပြင်ဆင်ချက်) အက်ဥပဒေ
Title: Parliament of the Union of Burma Law No. 50/1957 - ၁၉၅၇ ခုနှစ်၊ ချင်းဝိသေသတိုင်း (ပြင်ဆင်ချက်) အက်ဥပဒေ
Title: Parliament of the Union of Burma Law No. 25/1957 - The Union Bank of Burma (Amendment) Act, 1957 - ၁၉၅၇ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ဘဏ်(ပြင်ဆင်ချ
Title: Parliament of the Union of Burma Law No. 26/1957 - The Finance Act, 1957 - ၁၉၅၇ ခုနှစ်၊ ဘဏာတော်အက်ဥပဒေ
Title: Parliament of the Union of Burma Law No. 27/1957 - The Appropriation Act, 1957 - ၁၉၅၇ ခုနှစ်၊ ဘဏာတော်ငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးအက်ဥပဒေ
Title: Parliament of the Union of Burma Law No. 30/1957 - ၁၉၅၇ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလူငယ့်ရေးရာ ဗဟိုကောင်စီ (ရုပ်သိမ်းခြင်း) အက်ဥပဒေ
Title: Parliament of the Union of Burma Law No. 31/1957 - The Life Insurance Companies (Restriction) Act, 1957 - ၁၉၅၇ ခုနှစ်၊ အသက်အာမခံလုပ်ငန်း (တားမြစ်ခြင်း) အက်ဥပဒေ
Title: Parliament of the Union of Burma Law No. 32/1957 - The Union Citizenship Election (Amendment) Act, 1957 - ၁၉၅၇ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံသားအဖြစ်ရွေးချ
Title: Parliament of the Union of Burma Law No. 37/1957 - The Business Profits Tax (Second Amendment) Act, 1957 - ၁၉၅၇ ခုနှစ်၊ ရောင်းဝယ်လုပ်ကိုင်မှု၊ အမြတ်အစွန်ခွန် (�
Title: Parliament of the Union of Burma Law No. 17/1957 - The Supplementary Appropriation Act, 1957 - နောက်ထပ်ဘဏာတော်ငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးအက်ဥပဒေ
Title: Parliament of the Union of Burma Law No. 4/1957 - The Business Profits Tax (Amendment) Act, 1957 - ၁၉၅၇ ခုနှစ်၊ ရောင်းဝယ်လုပ်ကိုင်မှု အမြတ်အစွန်းခွန် (ပြင�
Title: Parliament of the Union of Burma Law No. 6/1957 - The Electricity Supply (Amendment) Act, 1957 - ၁၉၅၇ ခုနှစ်၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေး (ပြင်ဆင်ချက်) အက်ဥပဒေ
Title: Parliament of the Union of Burma Law No. 1/1957 - The President's (Salaries and Allowances) (Amendment) Act, 1957 - ၁၉၅၇ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတ (လစာနှင့်စရိတ်ငွေမ�
Title: Parliament of the Union of Burma Law No. 13/1957 - The Pali University and Dhamasariya (Amendment) Act, 1957 - ၁၉၅၇ ခုနှစ်၊ ပါဌိတက္ကသိုလ်နှင့် ဓမ္မာစာရိယ (ပြင်ဆင်ချ�
Title: Parliament of the Union of Burma Law No. 14/1957 - The Industrial Development Corporation Act, 1957 - ၁၉၅၇ ခုနှစ်၊ စက်မှုလက်မှုတိုးချဲ့လုပ်ကိုင်ရေးကော်ပို�
Title: Parliament of the Union of Burma Law No. 16/1957 - The Union Citizenship (Amendment) Act, 1957 - ၁၉၅၇ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်မှု (ပြင်ဆင�
Title: Parliament of the Union of Burma Law No. 18/1957 - The Finance (Amendment) Act, 1957 - ၁၉၅၇ ခုနှစ်၊ ဘဏာတော်(ပြင်ဆင်ချက်) အက်ဥပဒေ
Title: Parliament of the Union of Burma Law No. 23/1957 - The Supplementary Appropriation Act, 1957 - ၁၉၅၇ ခုနှစ်၊ နောက်ထပ်ဘဏာတော်ငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေး အက်ဥပဒေ
Title: Parliament of the Union of Burma Law No. 5/1957 - The Parliament of the Union of Burma Salaries the Speaker's and Deputy Speaker's of the Chambar of Nationalities and Chambar of Deputies (Amendment) Act, 1957 - ၁၉၅၇ ခုနှစ်၊ �
Title: Parliament of the Union of Burma Law No. 11/1957 - The Democratic Local Administration (Amendment) Act, 1957 - ၁၉၅၇ ခုနှစ်၊ ဒီမိုကရေစီဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေး (ပြင်ဆင်�
Title: Parliament of the Union of Burma Law No. 2/1957 - The Fire Services and Fire Brigade (Amendment) Act, 1957 - ၁၉၅၇ ခုနှစ်၊ မီးသတ်ဝန်ထမ်းနှင့် မီးသတ်အဖွဲ့ (ပြင်ဆင်
Title: Parliament of the Union of Burma Law No. 12/1957 - ၁၉၅၇ ခုနှစ်၊ အစိုးရအိမ်ဥပစာ (နှင်ထုတ်ခြင်း) (ပြင်ဆင်ချက်) အက်ဥပဒေ။
Title: Parliament of the Union of Burma Law No. 7/1957 - ၁၉၅၇ ခုနှစ်၊ ကိုယ်ပိုင်ဈေးများကို ဒေသန္တရအဖွဲ့ပိုင်ပြုလုပ်ခြင်း (ပြင်ဆင�
Title: Parliament of the Union of Burma Law No. 8/1957 - ၁၉၅၇ ခုနှစ်၊ ဇေယျဝတီသကြားကုမ္ပဏီလီမိတက်ကို ပြည်သူပိုင်ပြုလုပ်ခြင်း (ပြင်�
Title: Parliament of the Union of Burma Law No. 24/1957 - The Attorney General (Amendment) Act, 1957 - နိုင်ငံတော်ရှေ့နေချုပ် (ပြင်ဆင်ချက်) အက်ဥပဒေ
Title: Parliament of the Union of Burma Law No. 36/1957 - The Industrial Development Corporation (Amendment) Act, 1957 - ၁၉၅၇ ခုနှစ်၊ စက်မှုလက်မှုတိုးချဲ့လုပ်ကိုင်ရေး ကော
Title: Parliament of the Union of Burma Law No. 47/1957 - The Union Insurance Board (Amendment) Act, 1957 - ၁၉၅၇ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုအာမခံစနစ်အဖွဲ့ (ပြင်ဆင်ချက်) အက�
Title: Parliament of the Union of Burma Law No. 48/1957 - The Rehabilitation Board (Amendment) Act, 1957 - ၁၉၅၇ ခုနှစ်၊ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအဖွဲ့(ပြင်ဆင်ချက်) အက်ဥပေ
Title: Parliament of the Union of Burma Law No. 51/1957 - The Registration Of Private Nursing Home Act, 1957 - ၁၉၅၇ ခုနှစ်၊ ကိုယ်ပိုင်သူနာပြု ဂေဟာများမှတ်ပုံတင်အက်�
Title: Parliament of the Union of Burma Law No. 53/1957 - The Government Servants Repayment of Loans Suspension Act, 1957 - ၁၉၅၇ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံတော်ရာထမ်း၊မှုထမ်းများ ကြွေး
Title: Parliament of the Union of Burma Law No. 58/1957 - The Mandalay University Act, 1957 - ၁၉၅၇ ခုနှစ်၊ မန္တလေးတက္ကသိုလ်အက်ဥပဒေ
Title: Parliament of the Union of Burma Law No. 59/1957 - The Government Servants Moratorium Act, 1957 - ၁၉၅၇ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံတော်ရာထမ်းမှုထမ်းများ ကြွေးမြီးသက်�
Title: Parliament of the Union of Burma Law No. 60/1957 - The Habitual Offenders Bond Act, 1957 - ၁၉၅၇ ခုနှစ်၊ ပြစ်မှုကျူးလွန်တတ်သူများ ခြေချုပ်အက်ဥပဒေ